သဘာဝသယံဇာတအကျိုးအမြတ်ခွဲဝေရေး NLD အစိုးရက အပြောမဟုတ်၊ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်စေလို သဘာဝသယံဇာတအကြိုးအမွတျခှဲဝရေေး NLD အစိုးရက အပွောမဟုတျ၊ လကျတှလေု့ပျဆောငျစလေို – Federal Journal
ဆောင်းပါး 1 Like
သဘာဝသယံဇာတအကျိုးအမြတ်ခွဲဝေရေး NLD အစိုးရက အပြောမဟုတ်၊ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်စေလို သဘာဝသယံဇာတအကြိုးအမွတျခှဲဝရေေး NLD အစိုးရက အပွောမဟုတျ၊ လကျတှလေု့ပျဆောငျစလေို
NLD ပါတီ၏ ၂၀၁၅ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်းတွင် သဘာဝသယံဇာတအကျိုးအမြတ်ကို “မျှတစွာခွဲဝေမှုရှိစေရမည်”ဟု ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ NCA (၄)နှစ်ပြည့်အခန်းအနားမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်က သူ့မိန့်ခွန်းမှာ ဖက်ဒရယ်စနစ်နှင့်အညီ သယံဇာတခွဲသေမှု လိုအပ်ကြောင်း ထပ်မံထည့်သွင်း ပြောကြားသွားခဲ့သည်။ အင်မတန်ကောင်းမွန်ပါသည်။
သို့သော် မေးခွန်းတစ်ခုရှိပါသည်။ ယနေ့ချိန်အထိဘာကြောင့် အကောင်အထည်မဖော်သေးသနည်း။ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ(၃၇)(က)မှာ “သယံဇာတအားလုံး နိုင်ငံတော်ပိုင်သည်” ဟုသာပြဋ္ဌာန်းထားပြီး၊ အကျိုးအမြတ်(အခွန်) ခွဲဝေရေးဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက်နှင့် ကန့်သတ်ပိတ်ပြင်သည့် ပုဒ်မတစ်ခုမှမရှိပေ။ ခြေ-ဥ ဥပဒေပြုဇယား(၁)မှာ သဘာဝသယံဇာတများအမျိုးအစားများဖြစ်သော ကျောက်မြတ်ရတနာများ၊ ရေနံ၊ ကျောက်မီးသွေး၊ သဘာဝဓတ်ငွေ့နှင့် သတ္တုတွင်းထွက်အမျိုးမျိုး၊ ရေအားလျှပ်စစ်၊ ကျွန်းနှင့်သစ်မာများ စသည့်တို့ကို ပြည်ထောင်စု(ဗဟို)ဥပဒေပြုစာရင်းထဲတွင်ထည့်သွင်းထားသည်ဆိုသော်လည်း ယင်းသည် ခွဲဝေမှုကို ကန့်သတ်သတ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဥပဒေပြုခွင့်(အခွန်ကောက်ခံပိုင်ခွင့်)နှင့် အကျိုးအမြတ်ခွဲဝေမှု သည် သီးခြားစီဖြစ်ပါသည် (အောက်မှာ ပြန်ရှင်းပြပါမည်)။
တစ်နည်းအားဖြင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ အပြတ်အသတ်အနိုင်ရသော NLD အစိုးရအနေဖြင့် သယံဇာတအကျိုးအမြတ် ခွဲဝေရေးစနစ် (Natural Resources Revenue Sharing)ကို စိတ်ကြိုက် formula ရေးဆွဲပြီး ပြဋ္ဌာန်းဥပဒေဖြင့် လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ သို့ဆိုလျှင် အဘယ်ကြောင့် ယခုအထိ လက်ပိတ်နေရသနည်း။ အကြောင်းအရင်း သုံးခုရှိနိုင်သည်— ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်နှင့် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ၏ သဘောထားကို စောင့်ဆိုင်းနေသလော၊ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်စရာမလိုဘဲ ယခုလို ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်ကို ရိုးရိုးသားသား သတိမထားမိလေသလော၊ သို့မဟုတ် ထိုသို့ ပြည်နယ်များထံ သယံဇာတအကျိုးအမြတ်ခွဲဝေပေးမှာကို တကယ့်တကယ်မှာ လိုလားမှုမရှိခြင်းလော…။
မြန်မှာနိုင်ငံရှိ သဘောဝသယံဇာတ ကြွယ်ဝမှု
မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှောက်နှံမှု(FDI) စုစုပေါင်း၏ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် သဘာဝသယံဇာတ စက်မှုလုပ်ငန်းများဖြစ်ကြသော စွမ်းအင်၊ ရေနံနှင့်သဘာဝ ဓတ်ငွေ့၊ သတ္တုတွင်းနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း စသည့်ကဏ္ဍများမှ လာရောက်ခြင်းဖြစ်သည် (Oxford Business Group, 2016)။ အဖိုးတန်သယံဇာတများဖြစ်သော ရေနံ၊ သဘာဝဓတ်ငွေ့၊ ကျောက်မျက်ရတနာ၊ သတ္တုနှင့် သစ်… စသည်တို့ ရောင်းချမှုမှ ရရှိသော ငွေကြေးပမာဏသည် ၂၀၁၂ခုနှစ် တိုင်းပြည် စုစုပေါင်း နိုင်ငံခြားပို့ကုန်၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ခန့်ရှိပါသည် (Thet Aung Lyinn et al., 2014) ။ သယံဇာတ ထုတ်လုပ်မှုပမာဏကို ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းအလိုက် လေ့လာကြည့်ရာတွင် ရေနံနှင့်သဘာဝဓတ်ငွေ့မှ ရရှိသော အကျိုးအမြတ်သည် အစိုးရ၏ အခွန်ဘဏ္ဍာထဲတွင် ပမာဏအများဆုံးဝင်ငွေအဖြစ်(Bauer et. al, 2016) တွေ့ရသော်လည်း အမှန်တကယ် လက်တွေ့မှာ တရားမ၀င်နည်းလမ်းဖြင့် အများစု ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေရသာ ကျောက်မြတ်ရတနာ (ကျောက်စိမ်း၊ ရွှေ) ထုတ်လုပ်မှုသည်သာ နံပါတ်တစ် ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ Global Witness ၏ အစီရင်ခံစာအရ ၂၀၁၄ခုနှစ် တစ်နှစ်တည်းမှာတင် ကချင်ပြည်နယ် ကျောက်စိမ်းကုန်သွယ်မှုပမာဏ (အများစုက တရားမ၀င်) သည် အမေရီကန်ဒေါ်လာ (၃၁)ဘီလျံခန့်ရှိပြီး တိုင်းပြည် GDP စုစုပေါင်း၏ ထက်ဝက်ခန့်ရှိသည်ဟု ဖော်ပြခဲ့သည် (Witness, 2015)။ ခြုံငုံကြည့်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံ မှာရှိသော မြေပေါ်မြေအောက် အဖိုးတန်သယံဇာတ အများစု သည် တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်ဒေသများတွင် တည်ရှိ၊ ထွက်ရှိခြင်းပါသည်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ နိုင်ငံပေါင်း (၃၀) ခန့်က သဘာဝသယံဇာတမှ ရရှိသောအခွန်ဘဏ္ဍာကို အခြားအခွန်ဘ ဏ္ဍာနှင့် ရောစပ်ခြင်းမပြုဘဲ သီးခြားမူဝါဒဖြင့် စီမံခန့်ခွဲ သုံးစွဲသည်ဟု UNDPနှင့် NRGI ပူးတွဲထုတ်ပြန်ထားသည့် စစ်တမ်းအရသိရှိရသည်။ အဆိုပါ နိုင်ငံအများစုမှာလည်း သယံဇာတပေါကြွယ်ပြီး ဖက်ဒရယ်စနစ်တစ်စုံတရာ ကျင့်သုံးသော နိုင်ငံများဖြစ်ကြကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံအများစုတွင် သယံဇာတ အကျိုးအမြတ်များကို ဗဟို၊ ပြည်နယ် (နှင့် တစ်ချို့ ဒေသန္တရ) အစိုးရများကြားမှာ အသီးသီး ခွဲဝေမှုပြုလုပ် ကြပါသည်(Bauer, et el., 2016)။
ဇယား(၁) ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံအလိုက် သယံဇာတအခွန်အခ ကောက်ခံမှုနှင့် သုံးစွဲမှုများ
ဖက်ဒရယ်စနစ်ကျင့်သုံးသော နိုင်ငံအများစုတွင် ဇေဘုယျအားဖြင့် ဗဟိုနှင့်ပြည်နယ်(ဒေသန္တရ)အစိုးရကြား သယံဇာတ အခွန်ကောက်ပိုင်ခွင့်မှာ— ဗဟိုအစိုးရ၏ ကောက်ခံမှုက ပမာဏက ပိုများလေ့ရှိသည်ဆိုသော်လည်း ဗဟိုက ပြည်နယ်/ဒေသန္တရအစိုးရထံသို့ ပြန်လွှဲပြောင်း(Handover, or Transfer)သည့် ပမာဏများလည်း အတန်အသင့်ရှိပြန်သည်။ ထို့ကြောင့် ခြုံငုံကြည့်လျှင် သယံဇာတမှ ထွက်ရှိသောအကျိုးအမြတ်အများစုသည် သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်/ဒေသန္တရအစိုးရများက ကိုင်တွယ်သုံးစွဲသည် ကို တွေ့ရပါသည်။
အခြေခံအားဖြင့် သယံဇာတခွဲဝေမှုစနစ်ဟုဆိုရာတွင် ဒေါင်လိုက်ခွဲဝေမှုစနစ် (Vertical Type of Sharing)နှင့် အလျားလိုက်ခွဲဝေသည့်စနစ် (Horizontal Sharing)ကိုဟူ၍ ရှိပါသည်။ ဒေါင်လိုက်ခွဲဝေမှု ရှိသည်မှာ ဗဟိုအစိုးရနှင့် သယံဇာတထွက်ရှိရာ ပြည်နယ်(producting state)၊ ဒေသန္တရ အစိုးရအကြား အလွှာ(၂)ခု သို့မဟုတ်(၃)ခုကြား ခွဲဝေမှုကို ဆိုလိုပြီး အလျားလိုက်ခွဲဝေမှုဆိုသည်မှာ သယံဇာတ ထွက်ရှိရာ ပြည်နယ်နှင့် အခြား(မထွက်ရှိရာ) ပြည်နယ်များအကြား မျှဝေခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
၎င်းနှင့်အလားသဏ္ဍန်စွာ Derivation-based နှင့် Indicator-based အခြေခံ သယံဇာတခွဲဝေမှု ဆိုသည့် အမျိုးအစားလည်းရှိသည်။ Derivation-based NR Sharing System သည် သယံဇာတထွက်ရှိရာ ပြည်နယ်ကို အကျိုးအမြတ်ပိုပေးသည့် (အလေးပေးသည့်) စနစ်ဖြစ်ရာ Indicator-based system သည် လူဦးရေး၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု စသည့် အညွန်းကိန်းများကိုအခြေခံ၍ ခွဲဝေမှုစနစ်ဖြစ်သည်။ သို့သော် နိုင်ငံတော်တော်များများသည် မိမိပြည်တွင်း ရေခံမြေခံ အခြေအနေအရ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်၊ တစ်နည်းအားဖြင့် အထက်ပါ နည်းလမ်းနှစ်မျိုးကို ရောစပ်(Mixed System) ကျင့်သုံးကြသည်။ ပြည်နယ်နှင့် တတိယအလွှာဖြစ်သည့် ဒေသန္တရ (local)အစိုးရအကြား သယံဇာတခွဲဝေသည့်စနစ် နောက်တစ်ဆင့်ဖြင့် ထားရှိသင့်မသင့်ကိုမူ သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အဖြစ်ထားရှိရသည်။
အိမ်နီးချင်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကို အနီးစပ်ဆုံးနှင့် အသင့်တော်ဆုံး စံနမူနာအဖြစ် လေ့လာနိုင်ပါသည်။ အာချေး(Aceh)ပြည်နယ်အတွင်း နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှုကို အဆုံးသပ်စေနိုင်ရေး ရည်ရွယ်၍ ၎င်းပြည်နယ်မှထွက်ရှိသော ရေနံနှင့်သဘာဝဓတ်ငွေ့အခွန်ထဲက (၇၀)ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အခြား သယံဇာတအမျိုးသားအားလုံးမှ (၈၀)ရာခိုင်နှုန်းတို့ကို ပြည်နယ်အစိုးရထံ ခွဲဝေအပ်နှင်းထားသည်။
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုနှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ဖော်ဆောင်ရေး နှစ်(၇၀)ကျော် ခရီးနှင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သော်လည်း ယနေ့အထိ ဗဟိုနှင့်ပြည်နယ်များအကြား သယံဇာတအကျိုးအမြတ်ခွဲဝေမှုစနစ်ကို တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ ကျင့်သုံးခဲ့ဖူးခြင်း မရှိသေးပေ။ တစ်နည်းအားဖြင့် လက်ရှိအချိန်အထိ သုညရာခိုင်နှုန်း ခွဲဝေမှုစနစ်ကို ကျင့်သုံးလျက်ရှိပြီး ဗဟိုအစိုးရက တစ်ပြည်ထောင်စနစ် (Unitary System) ဆိုသည့်အတိုင်း ၁၀၀ရာခိုင်နှုန်း ယူထားပါသည်။
၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ တက်လာသည့် အရပ်သားအစိုးရလက်ထက်တွင် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရများ၏ ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဗဟိုအစိုးရမှ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရများကို ၂၀၁၃/၁၄ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် (၃.၄)ရာခိုင်နှုန်း ခွဲဝေပေးခဲ့ပြီး နှစ်တိုင်း နည်းနည်းစီ တိုးမြှင့်ပေးရာ ၂၀၁၆/၁၇ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် (၈.၂) ရာခိုင်နှုန်းအထိ ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေပေးပါသည် (အောက်မှာ ဇယားဖြင့်ဖော်ပြထားပါသည်)။ အပစ်ရပ်ဆဲထားသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ချို့ အပါအ၀င် ပြည်သူ့စစ်(BGF)တပ်ဖွဲ့များနှင့် အစိုးရ(တပ်မတော်)ကြား အပေးအယူ နည်းလမ်းဖြင့် သယံဇာတတူးဖော်အမှုခွဲခြင်းနှင့် အခြားတရားမ၀င် ခွဲဝေမှုတစ်ချို့တော့ရှိပါသည်။ သို့သော် ဤသည်ထို့မှာ တိုင်းရင်းသားများလိုလားသော သယံဇာတခွဲဝေမှုစနစ် မဟုတ်ချေ။
မိတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း၊ တိုင်းရင်းသားပါတီခေါင်းဆောင် အများစုနှင့် တိုင်းရင်းသား တတ်သိပညာရှင်တစ်ချို့အနေဖြင့် သဘာဝသယံဇာတနှင့်ပါတ်သက်၍ ပြည်နယ်များက ဗဟိုထက် စီမံခန့်ခွဲခွင့် အကျိုးအမြတ်ကို အများစု ခွဲဝေရရှိသင့်ကြောင်း သဘောထားရှိကြသည်ကို Ethnic Nationalities Affairs Center (ENAC)၏ သုတေသနစာတမ်းရသော်လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံများမှာ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ တင်ပြသည့် မိန့်ခွန်းနှင့် စာတမ်းများအရသော်လည်းကောင်း၊ စာရေးသူ၏ Master Degree Thesis တွေ့ရှိချက်အရသော်လည်းကောင်း သိရှိရပါသည်။ ယင်းသည် ယေဘုယအားဖြင့် အလွန်အကျွံတောင်းဆိုခြင်းမဟုတ်ဘဲ အထက်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဖက်ဒရယ်စနစ်အခြေခံသော နိုင်ငံအများစု၏ ကျင့်သုံးမှုပုံစံနှင့် အံဝင်ခွန်ကျဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်း ခပ်များများ (အထူးသဖြင့် UNFC မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသော လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့အစည်းများ)က ပြည်နယ် (၇၀)ရာခိုင်နှုန်း၊ ဗဟို (၃၀)ရာခိုင်နှုန်းအချိုးကျခွဲဝေမှုကို မူအားဖြင့် လိုလားကြသည်ကိုလည်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။ ယင်းသည်ပြင် အိမ်နီးချင်း အင်ဒိုနီးရှား (အာချေးပြည်နယ်)၏ စံနမူနာကို သဘောကျသောကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။
လက်ရှိ NLD အစိုးရထံ အကြံပြုချက်
လပိုင်းခန့်သာ ကျန်ရှိတော့သောသက်တမ်းအတွင်း အစိုးရအနေဖြင့် တိုင်းရင်းသားများလိုလားသော သယံဇာတခွဲဝေမှု အပြည့်အ၀ ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆိုသည်မှာ အလွန်အကျွံ မျှော်လင့်ရာရောက်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော် NLD အစိုးရအနေဖြင့် သူ၏ ရွေးကောက်ပွဲကတိက၀တ်နှင့်အညီ သယံဇာတအကျိုးအမြတ်ခွဲဝေမှုကို ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျော့ချသည့် ပဏမခြေလှမ်းအဖြစ် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် အောက်ပါ ဇယားအတိုင်း ဗဟို (၆၀)(၅၀)(၄၀)၊ ပြည်နယ်များ (၄၀)(၅၀)(၆) စသည့် အချိုးနှုန်းဖြင့် သယံဇာတအမျိုးအစားအပေါ်မူတည်၍ ဖော်မြူလာရေးဆွဲ ပြဋ္ဌာန်းလျက် ခွဲဝေကျင့်သုံးနိုင်ပါသည်။
သယံဇာတအမျိုးအစား ဗဟိုအစိုးရ ထုတ်ယူသည့်ပြည်နယ်* အခြားပြည်နယ်*အားလုံး
ရေနံနှင့်သဘာဝဓတ်ငွေ့(ကုန်းတွင်း) ၆၀ ၂၀ ၂၀
သတ္တုတွင်းထွက်ရတနာများ ၅၀ ၃၀ ၂၀
ကျွန်းနှင့် ရေအားလျှပ်စစ် ၄၀ ၄၀ ၂၀
(*ပြည်နယ်ဟုဆိုရာတွင် လက်ရှိ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး ၁၄ခုကိုဆိုလိုသည်)
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအထိဖြစ်သွားရသည့်အကြောင်းအရင်းများကို အလွယ်အား ဖြင့် နိုင်ငံရေးပြသနာဟုဆိုကြပြီး မည်သည့်နိုင်ငံရေးပြသနာလဲဟု စာရင်းပြုစုကြည့်လျှင် သဘာဝအရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှု(ခွဲဝေမှု)သည် ပထမဖြစ်သည်ဟု ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး(CNF) အတွင်းရေးမှူးလည်းဖြစ်၊ JMC-U အတွင်းရေးမှူးလည်းဖြစ်သည့် ဒေါက်တာရွှေခါရ်က မှတ်ချက်ပြုထားပါသည်။ နှုတ်ချိုချိုလေးဖြင့် တိုင်းရင်းသား များကို ချစ်ခင်ကြောင်း ပြောဆိုမည့်အစား၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြမည့်အစား၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်လက်ဝေ ပိုင်ဆိုင်ထားသော အစိုးရအနေဖြင့် အထက်ပါအတိုင်း ချင်းချင်း ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းသည် များစွာ လက်တွေ့ကျပါမည်။ သို့မှသာ နေပြည်တော်နှင့်အနီးတ၀ိုက် မိုးရွာသွင်းမှုကို ရပ်တန့်စေမှာဖြစ်ပြီး နယ်စပ်ဒေ သတိုင်းရင်းသားပြည်သူများ သာဓုသုံးကြိမ်ခေါ်ကြမှာ ဧကန်မလွဲဖြစ်ပါသည်။
Andrew Bauer, et el.,. (2016). Natural Resource Revenue Sharing. UNDP and NRGI . UNDP and NRGI.
ENAC. (2017). Natural Resources of MYANMAR (Burma) of MYANMAR (Burma). Chiang Mai: Ethnic Nationalities Aff airs Centre (Union of Burma).
Oxford Business Broup. (2016). The Report: Myanmar 2016. Oxford Business Group. Retrieved from https://www.oxfordbusinessgroup.com/overview/closing-gap-industrial-activities-are-key-growing-gdp-and-rising-incomes
Shrestha, B. H. (2010). “Natural Resources and Revenue Sharing in the New Federal System of Nepal. ResearchGate. Retrieved from file:///C:/Users/Dell/Desktop/Thesis%20Fact%20Collection/International%20cases/Natural%20Resource%20sharing%20(Napel%20model).pdf
Thet Aung Lynn et al. (2014). Natural Resources and Subnational Governments in Myanmar. MDRI, IGC and The Asia Foundation. Retrieved from file:///C:/Users/Dell/Desktop/Thesis%20Fact%20Collection/Myanar%20Theory/Natural%20Resourse%20and%20Subnational.PDF
Witness, G. (2017, May 17). Myanmar’s multi-billion dollar jade trade contributing to ethnic armed conflict. Retrieved from Global Witness: https://www.globalwitness.org/en/press-releases/myanmars-multi-billion-dollar-jade-trade-contributing-ethnic-armed-conflict-new-film-shows-ahead-landmark-peace-talks/
NLD ပါတီ၏ ၂၀၁၅ခုနှဈ ရှေးကောကျပှဲကွညောစာတမျးတှငျ သဘာဝသယံဇာတအကြိုးအမွတျကို “မြှတစှာခှဲဝမှေုရှိစရေမညျ”ဟု ထညျ့သှငျးဖျောပွခဲ့ပါသညျ။ ထို့ပွငျ ၂၀၁၉ခုနှဈ၊ NCA (၄)နှဈပွညျ့အခနျးအနားမှာ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကိုယျတိုငျက သူ့မိနျ့ခှနျးမှာ ဖကျဒရယျစနဈနှငျ့အညီ သယံဇာတခှဲသမှေု လိုအပျကွောငျး ထပျမံထညျ့သှငျး ပွောကွားသှားခဲ့သညျ။ အငျမတနျကောငျးမှနျပါသညျ။
သို့သျော မေးခှနျးတဈခုရှိပါသညျ။ ယနခြေိ့နျအထိဘာကွောငျ့ အကောငျအထညျမဖျောသေးသနညျး။ အခွခေံဥပဒပေုဒျမ(၃၇)(က)မှာ “သယံဇာတအားလုံး နိုငျငံတျောပိုငျသညျ” ဟုသာပွဋ်ဌာနျးထားပွီး၊ အကြိုးအမွတျ(အခှနျ) ခှဲဝရေေးဆိုငျရာ ပွဌာနျးခကျြနှငျ့ ကနျ့သတျပိတျပွငျသညျ့ ပုဒျမတဈခုမှမရှိပေ။ ခွေ-ဥ ဥပဒပွေုဇယား(၁)မှာ သဘာဝသယံဇာတမြားအမြိုးအစားမြားဖွဈသော ကြောကျမွတျရတနာမြား၊ ရနေံ၊ ကြောကျမီးသှေး၊ သဘာဝဓတျငှနှေ့ငျ့ သတ်တုတှငျးထှကျအမြိုးမြိုး၊ ရအေားလြှပျစဈ၊ ကြှနျးနှငျ့သဈမာမြား စသညျ့တို့ကို ပွညျထောငျစု(ဗဟို)ဥပဒပွေုစာရငျးထဲတှငျထညျ့သှငျးထားသညျဆိုသျောလညျး ယငျးသညျ ခှဲဝမှေုကို ကနျ့သတျသတျထားခွငျးမဟုတျပါ။ ဥပဒပွေုခှငျ့(အခှနျကောကျခံပိုငျခှငျ့)နှငျ့ အကြိုးအမွတျခှဲဝမှေု သညျ သီးခွားစီဖွဈပါသညျ (အောကျမှာ ပွနျရှငျးပွပါမညျ)။
တဈနညျးအားဖွငျ့ ပွညျထောငျစုလှတျတျောမှာ အပွတျအသတျအနိုငျရသော NLD အစိုးရအနဖွေငျ့ သယံဇာတအကြိုးအမွတျ ခှဲဝရေေးစနဈ (Natural Resources Revenue Sharing)ကို စိတျကွိုကျ formula ရေးဆှဲပွီး ပွဋ်ဌာနျးဥပဒဖွေငျ့ လှတျလှတျကြှတျကြှတျ ဆောငျရှကျနိုငျပါသညျ။ သို့ဆိုလြှငျ အဘယျကွောငျ့ ယခုအထိ လကျပိတျနရေသနညျး။ အကွောငျးအရငျး သုံးခုရှိနိုငျသညျ— ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျနှငျ့ တိုငျးရငျးသားခေါငျးဆောငျမြား၏ သဘောထားကို စောငျ့ဆိုငျးနသေလော၊ အခွခေံဥပဒပွေငျဆငျစရာမလိုဘဲ ယခုလို ဆောငျရှကျခှငျ့ရှိသညျကို ရိုးရိုးသားသား သတိမထားမိလသေလော၊ သို့မဟုတျ ထိုသို့ ပွညျနယျမြားထံ သယံဇာတအကြိုးအမွတျခှဲဝပေေးမှာကို တကယျ့တကယျမှာ လိုလားမှုမရှိခွငျးလော…။
မွနျမှာနိုငျငံရှိ သဘောဝသယံဇာတ ကွှယျဝမှု
မွနျမာနိုငျငံ နိုငျငံခွားရငျးနှီးမွှောကျနှံမှု(FDI) စုစုပေါငျး၏ ၈၅ ရာခိုငျနှုနျးသညျ သဘာဝသယံဇာတ စကျမှုလုပျငနျးမြားဖွဈကွသော စှမျးအငျ၊ ရနေံနှငျ့သဘာဝ ဓတျငှေ့၊ သတ်တုတှငျးနှငျ့ ခရီးသှားလုပျငနျး စသညျ့ကဏ်ဍမြားမှ လာရောကျခွငျးဖွဈသညျ (Oxford Business Group, 2016)။ အဖိုးတနျသယံဇာတမြားဖွဈသော ရနေံ၊ သဘာဝဓတျငှေ့၊ ကြောကျမကျြရတနာ၊ သတ်တုနှငျ့ သဈ… စသညျတို့ ရောငျးခမြှုမှ ရရှိသော ငှကွေေးပမာဏသညျ ၂၀၁၂ခုနှဈ တိုငျးပွညျ စုစုပေါငျး နိုငျငံခွားပို့ကုနျ၏ ၇၀ ရာခိုငျနှုနျး ခနျ့ရှိပါသညျ (Thet Aung Lyinn et al., 2014) ။ သယံဇာတ ထုတျလုပျမှုပမာဏကို ကဏ်ဍတဈခုခငျြးအလိုကျ လလေ့ာကွညျ့ရာတှငျ ရနေံနှငျ့သဘာဝဓတျငှမှေ့ ရရှိသော အကြိုးအမွတျသညျ အစိုးရ၏ အခှနျဘဏ်ဍာထဲတှငျ ပမာဏအမြားဆုံးဝငျငှအေဖွဈ(Bauer et. al, 2016) တှရေ့သျောလညျး အမှနျတကယျ လကျတှမှေ့ာ တရားမဝငျနညျးလမျးဖွငျ့ အမြားစု ထုတျလုပျရောငျးခနြရေသာ ကြောကျမွတျရတနာ (ကြောကျစိမျး၊ ရှေ) ထုတျလုပျမှုသညျသာ နံပါတျတဈ ဖွဈပါလိမျ့မညျ။ Global Witness ၏ အစီရငျခံစာအရ ၂၀၁၄ခုနှဈ တဈနှဈတညျးမှာတငျ ကခငျြပွညျနယျ ကြောကျစိမျးကုနျသှယျမှုပမာဏ (အမြားစုက တရားမဝငျ) သညျ အမရေီကနျဒျေါလာ (၃၁)ဘီလြံခနျ့ရှိပွီး တိုငျးပွညျ GDP စုစုပေါငျး၏ ထကျဝကျခနျ့ရှိသညျဟု ဖျောပွခဲ့သညျ (Witness, 2015)။ ခွုံငုံကွညျ့လြှငျ မွနျမာနိုငျငံ မှာရှိသော မွပေျေါမွအေောကျ အဖိုးတနျသယံဇာတ အမြားစု သညျ တိုငျးရငျးသားပွညျနယျဒသေမြားတှငျ တညျရှိ၊ ထှကျရှိခွငျးပါသညျ။
ကမ်ဘာပျေါမှာ နိုငျငံပေါငျး (၃၀) ခနျ့က သဘာဝသယံဇာတမှ ရရှိသောအခှနျဘဏ်ဍာကို အခွားအခှနျဘ ဏ်ဍာနှငျ့ ရောစပျခွငျးမပွုဘဲ သီးခွားမူဝါဒဖွငျ့ စီမံခနျ့ခှဲ သုံးစှဲသညျဟု UNDPနှငျ့ NRGI ပူးတှဲထုတျပွနျထားသညျ့ စဈတမျးအရသိရှိရသညျ။ အဆိုပါ နိုငျငံအမြားစုမှာလညျး သယံဇာတပေါကွှယျပွီး ဖကျဒရယျစနဈတဈစုံတရာ ကငျြ့သုံးသော နိုငျငံမြားဖွဈကွကွောငျး တှရှေိ့ရပါသညျ။ တဈနညျးအားဖွငျ့ ဖကျဒရယျနိုငျငံအမြားစုတှငျ သယံဇာတ အကြိုးအမွတျမြားကို ဗဟို၊ ပွညျနယျ (နှငျ့ တဈခြို့ ဒသေန်တရ) အစိုးရမြားကွားမှာ အသီးသီး ခှဲဝမှေုပွုလုပျ ကွပါသညျ(Bauer, et el., 2016)။
ဇယား(၁) ဖကျဒရယျနိုငျငံအလိုကျ သယံဇာတအခှနျအခ ကောကျခံမှုနှငျ့ သုံးစှဲမှုမြား
မှတျခကျြ: C = (Central) ဗဟို၊ P = Provincial (ပွညျနယျ)၊ L = Local (ဒသေန်တရ)
(Source: Bishnu H. Pandit and Him L. Shrestha, “Natural Resources and Revenue Sharing in the New Federal System of Nepal: A Proposed Model”. 2010) (Shrestha, 2010, p. 41)
အထကျပါ ဇယားအရ ဖကျဒရယျစနဈကငျြ့သုံးသော နိုငျငံအမြားစုတှငျ ဇဘေုယအြားဖွငျ့ ဗဟိုနှငျ့ပွညျနယျ(ဒသေန်တရ)အစိုးရကွား သယံဇာတ အခှနျကောကျပိုငျခှငျ့မှာ— ဗဟိုအစိုးရ၏ ကောကျခံမှုက ပမာဏက ပိုမြားလရှေိ့သညျဆိုသျောလညျး ဗဟိုက ပွညျနယျ/ဒသေန်တရအစိုးရထံသို့ ပွနျလှဲပွောငျး(Handover, or Transfer)သညျ့ ပမာဏမြားလညျး အတနျအသငျ့ရှိပွနျသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ခွုံငုံကွညျ့လြှငျ သယံဇာတမှ ထှကျရှိသောအကြိုးအမွတျအမြားစုသညျ သကျဆိုငျရာပွညျနယျ/ဒသေန်တရအစိုးရမြားက ကိုငျတှယျသုံးစှဲသညျ ကို တှရေ့ပါသညျ။
အခွခေံအားဖွငျ့ သယံဇာတခှဲဝမှေုစနဈဟုဆိုရာတှငျ ဒေါငျလိုကျခှဲဝမှေုစနဈ (Vertical Type of Sharing)နှငျ့ အလြားလိုကျခှဲဝသေညျ့စနဈ (Horizontal Sharing)ကိုဟူ၍ ရှိပါသညျ။ ဒေါငျလိုကျခှဲဝမှေု ရှိသညျမှာ ဗဟိုအစိုးရနှငျ့ သယံဇာတထှကျရှိရာ ပွညျနယျ(producting state)၊ ဒသေန်တရ အစိုးရအကွား အလှာ(၂)ခု သို့မဟုတျ(၃)ခုကွား ခှဲဝမှေုကို ဆိုလိုပွီး အလြားလိုကျခှဲဝမှေုဆိုသညျမှာ သယံဇာတ ထှကျရှိရာ ပွညျနယျနှငျ့ အခွား(မထှကျရှိရာ) ပွညျနယျမြားအကွား မြှဝခွေငျးကိုဆိုလိုသညျ။
၎င်းငျးနှငျ့အလားသဏ်ဍနျစှာ Derivation-based နှငျ့ Indicator-based အခွခေံ သယံဇာတခှဲဝမှေု ဆိုသညျ့ အမြိုးအစားလညျးရှိသညျ။ Derivation-based NR Sharing System သညျ သယံဇာတထှကျရှိရာ ပွညျနယျကို အကြိုးအမွတျပိုပေးသညျ့ (အလေးပေးသညျ့) စနဈဖွဈရာ Indicator-based system သညျ လူဦးရေး၊ ဆငျးရဲနှမျးပါးမှု စသညျ့ အညှနျးကိနျးမြားကိုအခွခေံ၍ ခှဲဝမှေုစနဈဖွဈသညျ။ သို့သျော နိုငျငံတျောတျောမြားမြားသညျ မိမိပွညျတှငျး ရခေံမွခေံ အခွအေနအေရ ကိုယျ့နညျးကိုယျ့ဟနျ၊ တဈနညျးအားဖွငျ့ အထကျပါ နညျးလမျးနှဈမြိုးကို ရောစပျ(Mixed System) ကငျြ့သုံးကွသညျ။ ပွညျနယျနှငျ့ တတိယအလှာဖွဈသညျ့ ဒသေန်တရ (local)အစိုးရအကွား သယံဇာတခှဲဝသေညျ့စနဈ နောကျတဈဆငျ့ဖွငျ့ ထားရှိသငျ့မသငျ့ကိုမူ သကျဆိုငျရာပွညျနယျ၏ လုပျပိုငျခှငျ့အဖွဈထားရှိရသညျ။
အိမျနီးခငျြး အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံကို အနီးစပျဆုံးနှငျ့ အသငျ့တျောဆုံး စံနမူနာအဖွဈ လလေ့ာနိုငျပါသညျ။ အာခြေး(Aceh)ပွညျနယျအတှငျး နှဈပေါငျးမြားစှာ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျ ပဋိပက်ခဖွဈပှားမှုကို အဆုံးသပျစနေိုငျရေး ရညျရှယျ၍ ၎င်းငျးပွညျနယျမှထှကျရှိသော ရနေံနှငျ့သဘာဝဓတျငှအေ့ခှနျထဲက (၇၀)ရာခိုငျနှုနျးနှငျ့ အခွား သယံဇာတအမြိုးသားအားလုံးမှ (၈၀)ရာခိုငျနှုနျးတို့ကို ပွညျနယျအစိုးရထံ ခှဲဝအေပျနှငျးထားသညျ။
ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးကွိုးပမျးမှုနှငျ့ ဖကျဒရယျစနဈဖျောဆောငျရေး နှဈ(၇၀)ကြျော ခရီးနှငျခဲ့ပွီ ဖွဈသျောလညျး ယနအေ့ထိ ဗဟိုနှငျ့ပွညျနယျမြားအကွား သယံဇာတအကြိုးအမွတျခှဲဝမှေုစနဈကို တဈကွိမျတဈခါမှ ကငျြ့သုံးခဲ့ဖူးခွငျး မရှိသေးပေ။ တဈနညျးအားဖွငျ့ လကျရှိအခြိနျအထိ သုညရာခိုငျနှုနျး ခှဲဝမှေုစနဈကို ကငျြ့သုံးလကျြရှိပွီး ဗဟိုအစိုးရက တဈပွညျထောငျစနဈ (Unitary System) ဆိုသညျ့အတိုငျး ၁၀၀ရာခိုငျနှုနျး ယူထားပါသညျ။
၂၀၀၈ အခွခေံဥပဒနှေငျ့အညီ တကျလာသညျ့ အရပျသားအစိုးရလကျထကျတှငျ ပွညျနယျနှငျ့တိုငျး ဒသေကွီးအစိုးရမြား၏ ပွညျသူ့ဝနျဆောငျမှုနှငျ့ ဒသေဖှံ့ဖွိုးရေးအတှကျ ဗဟိုအစိုးရမှ ပွညျနယျနှငျ့ တိုငျးဒသေကွီးအစိုးရမြားကို ၂၀၁၃/၁၄ဘဏ်ဍာရေးနှဈတှငျ (၃.၄)ရာခိုငျနှုနျး ခှဲဝပေေးခဲ့ပွီး နှဈတိုငျး နညျးနညျးစီ တိုးမွှငျ့ပေးရာ ၂၀၁၆/၁၇ဘဏ်ဍာရေးနှဈတှငျ (၈.၂) ရာခိုငျနှုနျးအထိ ဘဏ်ဍာငှခှေဲဝပေေးပါသညျ (အောကျမှာ ဇယားဖွငျ့ဖျောပွထားပါသညျ)။ အပဈရပျဆဲထားသညျ့ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးတဈခြို့ အပါအဝငျ ပွညျသူ့စဈ(BGF)တပျဖှဲ့မြားနှငျ့ အစိုးရ(တပျမတျော)ကွား အပေးအယူ နညျးလမျးဖွငျ့ သယံဇာတတူးဖျောအမှုခှဲခွငျးနှငျ့ အခွားတရားမဝငျ ခှဲဝမှေုတဈခြို့တော့ရှိပါသညျ။ သို့သျော ဤသညျထို့မှာ တိုငျးရငျးသားမြားလိုလားသော သယံဇာတခှဲဝမှေုစနဈ မဟုတျခြေ။
မိတိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျး၊ တိုငျးရငျးသားပါတီခေါငျးဆောငျ အမြားစုနှငျ့ တိုငျးရငျးသား တတျသိပညာရှငျတဈခြို့အနဖွေငျ့ သဘာဝသယံဇာတနှငျ့ပါတျသကျ၍ ပွညျနယျမြားက ဗဟိုထကျ စီမံခနျ့ခှဲခှငျ့ အကြိုးအမွတျကို အမြားစု ခှဲဝရေရှိသငျ့ကွောငျး သဘောထားရှိကွသညျကို Ethnic Nationalities Affairs Center (ENAC)၏ သုတသေနစာတမျးရသျောလညျးကောငျး၊ ပွညျထောငျစုငွိမျးခမျြးရေးညီလာခံမြားမှာ တိုငျးရငျးသားခေါငျးဆောငျမြား တငျပွသညျ့ မိနျ့ခှနျးနှငျ့ စာတမျးမြားအရသျောလညျးကောငျး၊ စာရေးသူ၏ Master Degree Thesis တှရှေိ့ခကျြအရသျောလညျးကောငျး သိရှိရပါသညျ။ ယငျးသညျ ယဘေုယအားဖွငျ့ အလှနျအကြှံတောငျးဆိုခွငျးမဟုတျဘဲ အထကျတှငျ ဖျောပွထားသညျ့အတိုငျး ဖကျဒရယျစနဈအခွခေံသော နိုငျငံအမြားစု၏ ကငျြ့သုံးမှုပုံစံနှငျ့ အံဝငျခှနျကဖြွဈသညျဟု ဆိုနိုငျပါသညျ။ တိုငျးရငျးသား နိုငျငံရေးအဖှဲ့အစညျး ခပျမြားမြား (အထူးသဖွငျ့ UNFC မဟာမိတျအဖှဲ့ဝငျဖွဈခဲ့ဖူးသော လကျနကျကိုငျဖှဲ့အစညျးမြား)က ပွညျနယျ (၇၀)ရာခိုငျနှုနျး၊ ဗဟို (၃၀)ရာခိုငျနှုနျးအခြိုးကခြှဲဝမှေုကို မူအားဖွငျ့ လိုလားကွသညျကိုလညျး လလေ့ာတှရှေိ့ရပါသညျ။ ယငျးသညျပွငျ အိမျနီးခငျြး အငျဒိုနီးရှား (အာခြေးပွညျနယျ)၏ စံနမူနာကို သဘောကသြောကွောငျ့ ဖွဈနိုငျသညျ။
လကျရှိ NLD အစိုးရထံ အကွံပွုခကျြ
လပိုငျးခနျ့သာ ကနျြရှိတော့သောသကျတမျးအတှငျး အစိုးရအနဖွေငျ့ တိုငျးရငျးသားမြားလိုလားသော သယံဇာတခှဲဝမှေု အပွညျ့အ၀ ဆောငျရှကျပေးဖို့ဆိုသညျမှာ အလှနျအကြှံ မြှျောလငျ့ရာရောကျပါလိမျ့မညျ။ သို့သျော NLD အစိုးရအနဖွေငျ့ သူ၏ ရှေးကောကျပှဲကတိကဝတျနှငျ့အညီ သယံဇာတအကြိုးအမွတျခှဲဝမှေုကို ဗဟိုခြုပျကိုငျမှုလြော့ခသြညျ့ ပဏမခွလှေမျးအဖွဈ အတိုငျးအတာတဈခုအထိ ပွုလုပျနိုငျပါသညျ။ ဥပမာအားဖွငျ့ အောကျပါ ဇယားအတိုငျး ဗဟို (၆၀)(၅၀)(၄၀)၊ ပွညျနယျမြား (၄၀)(၅၀)(၆) စသညျ့ အခြိုးနှုနျးဖွငျ့ သယံဇာတအမြိုးအစားအပျေါမူတညျ၍ ဖျောမွူလာရေးဆှဲ ပွဋ်ဌာနျးလကျြ ခှဲဝကေငျြ့သုံးနိုငျပါသညျ။
သယံဇာတအမြိုးအစား ဗဟိုအစိုးရ ထုတျယူသညျ့ပွညျနယျ * အခွားပွညျနယျ*အားလုံး
ရနေံနှငျ့သဘာဝဓတျငှေ့(ကုနျးတှငျး) ၆၀ ၂၀ ၂၀
သတ်တုတှငျးထှကျရတနာမြား ၅၀ ၃၀ ၂၀
ကြှနျးနှငျ့ ရအေားလြှပျစဈ ၄၀ ၄၀ ၂၀
(*ပွညျနယျဟုဆိုရာတှငျ လကျရှိ ပွညျနယျနှငျ့တိုငျးဒသေကွီး ၁၄ခုကိုဆိုလိုသညျ)
မွနျမာနိုငျငံအတှငျး လကျနကျကိုငျပဋိပက်ခအထိဖွဈသှားရသညျ့အကွောငျးအရငျးမြားကို အလှယျအား ဖွငျ့ နိုငျငံရေးပွသနာဟုဆိုကွပွီး မညျသညျ့နိုငျငံရေးပွသနာလဲဟု စာရငျးပွုစုကွညျ့လြှငျ သဘာဝအရငျးအမွဈ စီမံခနျ့ခှဲမှု(ခှဲဝမှေု)သညျ ပထမဖွဈသညျဟု ခငျြးအမြိုးသားတပျဦး(CNF) အတှငျးရေးမှူးလညျးဖွဈ၊ JMC-U အတှငျးရေးမှူးလညျးဖွဈသညျ့ ဒေါကျတာရှခေါရျက မှတျခကျြပွုထားပါသညျ။ နှုတျခြိုခြိုလေးဖွငျ့ တိုငျးရငျးသား မြားကို ခဈြခငျကွောငျး ပွောဆိုမညျ့အစား၊ အကွောငျးအမြိုးမြိုးပွမညျ့အစား၊ လုပျပိုငျခှငျ့လကျဝေ ပိုငျဆိုငျထားသော အစိုးရအနဖွေငျ့ အထကျပါအတိုငျး ခငျြးခငျြး ဆောငျရှကျပေးခွငျးသညျ မြားစှာ လကျတှကေ့ပြါမညျ။ သို့မှသာ နပွေညျတျောနှငျ့အနီးတဝိုကျ မိုးရှာသှငျးမှုကို ရပျတနျ့စမှောဖွဈပွီး နယျစပျဒေ သတိုငျးရငျးသားပွညျသူမြား သာဓုသုံးကွိမျချေါကွမှာ ဧကနျမလှဲဖွဈပါသညျ။